MON PHARMACY: အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို ချက်ချင်းပဲ ကောက်ကာငင်ကာ သောက်သင့်သလား
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို ချက်ချင်းပဲ ကောက်ကာငင်ကာ သောက်သင့်သလား
Don't be too dependent on painkillers. They brief immediate relief but can lead to dependence with long-term use.
ခေါင်းကိုက်၊ သွားကိုက်(သို့) ခါးနာတာ ခံစားရတဲ့အခါမှာ ကနဦးတုံ့ပြန်မှုက နာကျင်မှုသက်သာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကုထုံးလုပ်ဆောင်ချက်က အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ဘေးကင်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အဲဒီလိုဆေးမျိုးကို ချက်ချင်းသောက်သင့်ပါသလား။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို ချက်ချင်းနာကျင်သက်သာစေဖို့ စီမံဖော်စပ်ထားပါတယ်။ သို့သော် သုတေသီများအကြံပြု ထားတာကတော့ အလွန်အကျွံသုံးခြင်း(overuse)ဟာ ဆေးစွဲခြင်း(သို့)လွဲမှားစွာသုံးစွဲခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအများစုက ဘိန်းနဲ့တူတဲ့ဒြပ်စင်၊ နာကျင်ခံစားမှုတုံ့ပြန်တဲ့ အာရုံကြောဆီသို့ သတင်းပို့လွှတ်တဲ့အရာ(pain receptors)ကို လျော့နည်းစေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းများနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ လတ်တလောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအရ စာနာငဲ့ညာမှုလျော့နည်းပြီး မှီဝဲအားကိုးမှု(Dependence)ကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း သိရပါတယ်။
ဘိန်းအုပ်စုအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ(Opioid palliatives)မှာ ပါဝင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကတော့ အသက်ရှူ ခက်ခဲခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ပျို့ အန်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်တဲ့တုံ့ပြန်မှု၊ ဝမ်းချု ပ်ခြင်းနဲ့ ပိုဆိုးရွားလာရင် အလွန်အကျွံသောက်ရာမှ သေသည်အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားမရှိခြင်း (sexual impotence)ဖြစ်ပွားစေကြောင်း တင်ပြအစီရင်ခံထားပါတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအများစုမှာ လိင်တံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ကမောက်ကမ(erectile dysfunction)ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကျားဟော်မုန်း(testosterone)ပမာဏကို လျှော့ချဖို့ အထောက်အကူပြု ကြောင်း လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများက အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများဟာ ယာယီခဏသာသက်သာစေပြီး ရေရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာအတွက် လုံးဝထိရောက်မှုမရှိကြောင်း သဘောတူလက်ခံကြပါတယ်။
နာတာရှည်အဆစ်ရောင်ဝေဒနာ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနဲ့ အာရုံကြောနာကျင်မှုကို ခံစားနေရသူတွေက မရည်ရွယ်ဘဲ မသိစိတ်က အဆိုပါအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဝါးများအပေါ် မှီခိုမှုကို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ကတော့ မလွယ်ကူပါ။ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရမဲ့သူများက အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများဟာ သူတို့ကြာရှည်ခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုအပေါ် ထိရောက်အစွမ်းထက်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဆရာဝန်များက ဆေးဖြတ်ပြီးနောက် ၁၂ပတ်ကြာရင် မနှစ်မြို့ ဖွယ်ရောဂါလက္ခဏာများ(withdrawal symptoms) ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း သဘောတူလက်ခံထားပါတယ်။
အစောပိုင်းသုတေသနေမှာ ဖော်ပြထားတာက ပါရာစီတမောမှာပါဝင်တဲ့(Acetaminophen)က လူတွေရဲ့ စာနာထောက်ထားမှုစိတ်(empathy)ကို ဆုံးရှုံးစေပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်သုံးစွဲလာရင် နာကျင်မှုဝေဒနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ စိတ်ဝေဒနာအခံရှိသူတွေအဖို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအဆက်မပြတ်သုံးခြင်းကလည်း ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် တိုးပွားစေပါတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကြာရှည်စွာသုံးစွဲခြင်းက စိတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ကနဦးစိတ်ပညာရှင်များက အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးရဲ့ ခေတ္တအလွန်ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေပြီး ဆေးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ အလွန်အမင်းဝမ်းနည်းတတ်တဲ့အစွမ်းကို ဆက်စပ်တွေးတောနေကြပါတယ်။ ဘိန်းပါဝင်မှု(opioid content)များရင်လည်း များသောအားဖြင့် စိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေနိုင်တဲ့ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လိင်ကိစ္စကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှုများမှာ စိတ်ဆန္ဒဖော်ပြမှုတားမြစ်တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံ(suppressive experience)ကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ( inhibit) စေနိုင်ပါတယ်။
နာကျင်မှုကို ထိန်းချု ပ်တဲ့ တစ်ခြားနည်းလမ်းများလည်း ရှိပါတယ်။ စတီးရွိက်မဟုတ်တဲ့ အရောင်ကျစေတဲ့ဆေးများ(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)၊ အနှိပ်ခံခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ မလိုလားအပ်သောအပြုအမူကို ရပ်တန့်ဖို့ မနှစ်မြို့ဖွယ် လှုံ့ဆော်မှုကုထုံးနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးကုထုံး (conditioning and physical therapies)တို့ဖြင့် အချို့သောနေရာများရှိ နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ဘယ်ကိစ္စမဆို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမသောက်မီ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကြောင့် ဆေးစွဲစေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ်ကို ကျွမ်းကျင်သူများအား မေးမြန်းပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ဆေးကိုရယူပြီး ဘယ်လောက်အထိကြာအောင် သောက်သင့်သလဲဆိုတာကို မေးပါ။ တစ်ချို့က လူတွေလိုအပ်တာထက် ပိုနိုင်တယ်လို့ ပြောကြသော်လည်း ဆရာဝန်အများစုက များသောအားဖြင့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကို ၁၅ရက်မှရက်၃၀အထိသာ ညွှန်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။ ကာလကြာရှည်စွာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ဖို့လိုတဲ့ အချိန်တိုင်း ဒုတိယလူရဲ့အမြင်၊အယူအဆ(second opinion)ကို သေချာရအောင်လုပ်ပါ။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်း မှန်ကန်စွာသုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။ ဆေးဝါးနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဆေးရုံတက်ရခြင်း၊ သေခြင်းတြို့ဖစ်ရတဲ့ အများစုဟာ ဗီရိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ ရက်လွန်ဆေးတွေသောက်လို့ ဖြစ်ရကြောင်း လေ့လာမှုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မည်သည့်ရက်လွန်ဆေးဝါးမဆို စွန့်ပစ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ သေချာသိုလှောင်ထိန်းသိမ်းကြပါလို့ အကြံပြုရင်း "တန်ဆေး၊လွန်ဘေး"ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆေးဝါးများကို ချင့်ချိန်စွာ သုံးတတ်ပါစေ။ ကိုယ်တိုင်ဆရာကြီးလုပ်ပြီး သူများပျောက်တိုင်း သူများပြောတိုင်း လျှောက်မသောက်ဘဲ ဆေးပညာရှင်၊ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို ရယူကာ လူတိုင်း ဘေးရန်ကင်းကွာ သက်ရှည်ကျန်းမာကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ရင်း............
(Reference- Should you be popping that painkiller immediately? written by Canis Inculta, 12 Jun 2016, MIMS)
Posted by San Mishell at 1:31 AM